Soo dejisan SpeedX 3D 1.96 – Vessoft
Soo dejisan SpeedX 3D
SpeedX 3D – kulan ah oo caan ah in la wado xawaare sare on track 3D ah. Ciyaaryahanka ayaa u baahan yahay in la qabto ka baxay ilaa iyo intii macquul on track abid-beddelo si loo helo tirada ugu badan ee dhibcaha. In SpeedX 3D jiro helaan qaabab kala duwan kulan oo heerar kala duwan leh oo dhib sii kordhaya iyo koritaanka caqabadaha dheeraad ah inta ay ku dhaco. In SpeedX 3D jirto weyn sawiro 3D iyo raacidda muusikada way wanaagsan tahay in si fiican u taageertaa jawiga gudaha. Sidoo kale SpeedX 3D awood u yihiin inay u tartamaan ciyaartoyda kale ee Internetka.
The sawiro 3D wanaagsan
Heerar badan oo ka adag tahay kala duwan
Isticmaalka noocyo kala duwan oo gunno
.Wadashaqayntaas Online diiwaanada
Tartanka ciyaartoyda kale
SpeedX 3D Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Steam 2.1.6
العربية, English, Français, Español... Angry Birds 6.0.1
العربية, English, Українська, Français... Badoo 4.54.2